Igumbi lesibhakabhaka labucala entliziyweni yeNtaba iVernon
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguJordan
Ngaphakathi kumqolo omkhulu wokuphumelela ikhaya kufutshane neMonument yaseWashington yantlandlolo, kukho igumbi labucala elineebhedi ezimbini eziphindwe kabini kunye nendawo yokufunda epholileyo phantsi kwesibhakabhaka. Eli gumbi lingaphantsi likumgama wokuhamba ukusuka ezivenkileni, kwiindawo zokutyela, kwizibuko elingaphakathi, iMyuziyam yoBugcisa kaWalter, nokunye okuninzi! Iindwendwe zinendawo yokupaka yokupaka, ukufikelela kwindawo yepatio ekhanyiswe lilanga, kunye nokungena ngasese okukhuselekileyo. Ikhitshi linesinki, imicrowave, ifriji egcweleyo,
Nceda ubuze ngesilo-qabane phambi kokuba ubhukishe.
Iibhedi ezimbini ezigcweleyo ezifakelwe ilinen ephezulu, idesika, kunye nesibuko esipheleleyo. Amagumbi angaphantsi afakelwe iisilingi zokuhombisa iithayile zokuwa. Nceda uqaphele, ukuba izandi ngamanye amaxesha zihamba ukusuka kwindawo yethu ukuya kumgangatho ongaphantsi.
Ngelixa eli gumbi likumgangatho ongaphantsi, linesilingi eziphakamileyo kunye nokukhanya kwesibhakabhaka ngaphezulu kwendawo yokufunda. Kukwakho nezibane eziqaqambileyo ze-LED ezenza ukuvakala kwasemini kunye nezibane zomoya opholileyo.
Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi kwabelwana kunye neyunithi enye yeendwendwe. Ukuba ufuna ukuba nendlu elinganayo neyakho yonke, ndincoma ukubhukisha olunye uluhlu lwam "Igumbi labucala entliziyweni yeMount Vernon," ukuba amagumbi omabini ayafumaneka (jonga ikhonkco kwenye iyunithi yam kwiprofayile).
• 32" TV ene-Roku kunye nosasazo lwedijithali lwasekhaya
• Ufikelelo kwi-Intanethi kwinethiwekhi engenazingcingo
• I-Hypoallergenic yokuhlamba umzimba, ishampu kunye ne-conditioner inikezelwe
• Ibathmat, iitawuli, isixhobo sokomisa iinwele, isixhobo sokususa imake-up, iayini, kunye nebhodi yoku-ayina zinikezelwe.
• I-Dyson eshushu/epholileyo ifeni kunye noMcoci.
• I-Dehumidifier (igumbi likumgangatho ongaphantsi kwaye linokufuma kwiinyanga zasehlotyeni)
INGABA UNOBUNZIMA bokunyuka izinyuko? - Nceda uqaphele: Eli gumbi likumgangatho ongaphantsi wepropathi yembali ngoko izitepsi zingumnqantsa.
UKUZA NE-PET?-Sizivumela izilwanyana zasekhaya ngokwemeko nganye, ngoko ke buza ngaphambi kokuba ubhukishe. Kukho umrhumo wesilwanyana esizii-$50 (eli gumbi linobuninzi bezilwanyana zasekhaya ezimbini). Umrhumo uhlawulela ucoceko olukhethekileyo njengoko sibekwe kufutshane nezibhedlele kwaye sihlala sifumana iindwendwe ezinobuzaza obunxulumene nesilwanyana sasekhaya.
MALUNGA NENDLU: Le yindlu ehlala umnini-dolophu, enemigangatho emithathu eyakhiwa ngowe-1851. Sihlala apha nabantwana abancinane ababini, kodwa ngoxa usenokusiva ngamaxesha athile, unesango lakho labucala lokungena nendawo eyahlukileyo kweyethu.
Ipropati inesixokelelwano se-alam. Usenokuva i-alam ngamaxesha athile ingalo kwaye ukhulule izixhobo njengoko singena kwaye siphuma kwiindawo ezithile zendlu. Oku akunampembelelo kwiindawo zeendwendwe / ukungena ngaphakathi nangaphandle kwepropati.
IMount Vernon yindawo eyimbali yaseBaltimore enamakhaya amaninzi asusela kwinkulungwane ye-19. Lo mmandla uqhayisa ngeSikhumbuzo saseWashington sokuqala, esidityaniswe luthotho lweepaki ezintle. Kule ngingqi, uya kufumana iMyuziyam yobuGcisa kaWalter, iPeabody Conservatory, kunye nePeabody neEnoch Pratt Libraries. Ngobuninzi beendawo zokutyela, iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwisiFrentshi, iSpanish, i-Afghani, i-American cuisine nokunye okuninzi.
Inombolo yomthetho: STR-940383